Sida loo isticmaalo taleefankaaga gacanta sida Nintendo Switch control | Androidsis
Sida loo isticmaalo taleefankaaga gacanta sida Nintendo Switch control
DaniPlay | 18/08/2021 08:36 | La cusbooneysiiyay 19/08/2021 20:22 | Codsiyada Android, Tababarada
Nintendo ayaa sannadihii ugu dambeeyay soo saartay consoles -ka fiidiyowga ee loogu talagalay in la isticmaalo oo ku raaxayso malaayiin qof oo raacsan adduunka oo dhan. Konsolkii ugu dambeeyay ee ay shirkaddu billowday wuxuu ahaa Nintendo Switch, oo ah madal isku-dhafan oo aad ku ciyaari karto shaashad 6,2-inji ah, laakiin sidoo kale telefishanka.
Shirkadda Jabaanku waxay had iyo jeer iska fogeysaa Sony iyo Microsoft, si aan loo barbar dhigin qalabkooda marka loo eego qalabka marka loo eego kuwa ay bilaabeen labada kale. Qeybta aasaasiga ah ee qunsuliyadda waa farxaddeeda-ConSida loo yaqaan buro dhinacyada guddiyada, waa laga saari karaa oo loo isticmaali karaa sida suufka caadiga ah.
Maanta waxaa mahad leh farsamada mobile -ka waxaa loo isticmaali karaa sida Nintendo Switch control, waxaas oo dhan waxay ku mahadsan yihiin codsi uu sameeyay DeepBlue Labs. Waxay nadiifinaysaa kontaroolka dalwaddu noocyadii kala duwanaa ee ilaa hadda la sii daayay, dhammaantoodna waxay ku hoos jiraan khariidaynta iyo astaamaha cusub.
2 In version Alpha
3 Rakibaadda JoyCon Android, tallaabooyinka ugu horreeya
4 Nooca la bixiyay
5 U isticmaal NFC faa'iidadaada
6 Shuruudaha lagu ciyaaro JoyCon Droid
Adigoo adeegsanaya barnaamijka JoyCon Droid waxaad taleefankaaga Android u rogi kartaa kontoroolaha console Nintendo, waxay ku dayan doontaa JoyCon caadi ah iyo xitaa nooc horumarsan. Midka koowaad waa kan loo isticmaalo konsoleelka gacanta ee la yaqaan ee loo yaqaan JoyCon, kan labaadna waa "Pro Classic".
Suufkan dalwaddu wuxuu shaqaynayaa marka loo isticmaalayo sidii mid dheeraad ah, maadaama in kasta oo uu si fiican u shaqaynayo, haddana waxa fiican in la helo mid jidheed. JoyCon Droid waa mid ka mid ah beddellada haddii aan rabno inaan ka hor ciyaarno saaxiibkeen iyada oo aan loo baahnayn in la iibsado koontaroole waqtigaas saxda ah.
Dejinta JoyCon Droid waa mid aad u fudud, waxay dhex mari doontaa soo dejinteeda iyo dejinta badhamada ficilka, kuwaas oo ay hore u qaabeeyeen konsole. Fiican haddii aad rabto inaad u ciyaarto sidaad caadiyan ugu samayso madasha Nintendo ilaa daqiiqaddaas saxda ah.
In version Alpha
Illaa iyo hadda mashruucu wuxuu ku sii socdaa nooca Alpha, sidaa darteed waa la arki doonaa inuu sii socdo inta lagu jiro marxalado kala duwan. Nooca beta, haddii ugu dambeyntii la sii daayo, wuxuu noqon lahaa mid ka mid ah wejiyada muhiimka ah, maadaama ay qaadan lahayd tallaabo weyn ka dib waqti sugitaan xoog leh.
Codsigu si fiican buu ula shaqeeyaa dhammaan cayaaraha, waxa ugu fiican ayaa ah in khariidadaha la sameeyo dhammaan badhamada, ugu yaraan kuwa loo adeegsado ficil ahaan, maaddaama iskutallaabtu ay noqon doonto mid lagu maareeyo dhammaan cinwaannada oo aan loo baahnayn in la waafajiyo. Waxay ku filnaan doontaa in la isbarbar dhigo, ka dibna la awoodo in la taabto dejinta abka.
Waxay leedahay hoos u dhac, kuma shaqeyneyso dhammaan taleefannada casriga ah, in kasta oo ay ku samayso badidooda, marka waxa ugu horreeya waxay noqon doontaa inaad ku tijaabiso taleefanka aad u isticmaasho kan ugu weyn. Noocyadii hore ee mobilada caadi ahaan si fiican bay u socotaa, sidoo kale waxay ku dhacdaa kuwo cusub, laakiin tani aad bay u kala duwanaan doontaa iyadoo ku xiran astaanta iyo sidoo kale tusaalaha.
Rakibaadda JoyCon Android, tallaabooyinka ugu horreeya
Tallaabooyinka ugu horreeya ee JoyCon Android waa sahlan yihiin, gaar ahaan rakibidda qalabkan caanka ah ee xakamayn doona Nintendo Switch adiga oo isticmaalaya moobilkaaga. Isticmaalkiisu wuxuu noqon doonaa ku -dayashada kaamilka ah, dhammaantoodna waxay u shaqaynayaan sidii adigoo adeegsanaya Nintendo JoyCon asalka ah.
Waxa kaliya ee ku kacaya waa isku -darka, laakiin marka taasi dhacdo wax walba si hagaagsan ayey u socon doonaan, maadaama dalabka badanaa loo isticmaalo ikhtiyaarka labaad ee kontoroolka fog ee asalka ah. JoyCon -ka jirka ayaa badiyaa laba u kala jaban, ka dibna laga hirgaliyay labada dhinac ee shaashadda ee la socota qalabka ciyaarta.
Si aad u rakibto, samee waxyaabaha soo socda:
Soo dejiso JoyCon Droid halkan ka, hadda lagama heli karo Dukaanka Play ka dib markii la martigaliyay in ka badan hal sano
Marka la soo dejiyo, waxay u sii socon doontaa rakibidiisa, bixi oggola oo sii oggolaansho Bluetooth si ay u shaqayso
Dooro JoyCon si aad ugu dayato, bidix ama midig, tani waa dan la'aan, waxaad isticmaali kartaa midka kugu habboon waqtigaas, waxaad kaloo haysataa ikhtiyaar inaad ku doorato nooca «Pro», waa maamulaha ugu fiican si aad uga hesho inta ugu badan magac kasta
Hadda guji «Mar dambe» oo amarka la doortay ayaa la soo bandhigi doonaaHaddii aad khalad samaysay oo aad doonayso inaad mid kale doorato, waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad ku laabato, samee isla nidaamka adigoo gujinaya «Later» si aad u tagto suufka la doortay
Hadda Nintendo Switch guji astaanta ilaaliyaasha, kan afaraad ee bidixda ayaa tusaya JoyCon icon
Konsole -ga, guji "Beddel amarka ama habka isku -dhejinta"
Marka tallaabadan la sameeyo, taleefanku wuxuu ku tusi doonaa codsiga isku -biirinta leh Nintendo Switch, aqbal
Marka isugeynta la sameeyo, konsole wuxuu ku tusi doonaa taleefanka firfircoon sida suufka JoyCon, isagoo awood u leh inuu xakameeyo konsole si buuxda iyo waliba dhammaan cayaaraha si ay ula jaanqaadaan dhammaantood
Nooca la bixiyay
Nooca loo yaqaan Pro wuxuu ku kacayaa 5,99 euro si loo tirtiro xayeysiiskaIn kasta oo ay aad u yar yihiin, haddana waxay mudan tahay taageerada horumariyaha. Waxaa loo adeegsan karaa si dhammaystiran iyada oo aan la bixin qaddarkaas oo ku saabsan 6 euro, laakiin waxay ka saari doontaa xayeysiiska dalabka si joogto ah.
Waxa ugu fiican ayaa ah in marka hore la tijaabiyo inay si fiican ugu shaqeyso taleefanka aad ku rakibtay, maadaama bixinta lacag -bixintaani ay tahay mid gaar ah oo qeexan, weligeed ah. Waxaa loo adeegsan karaa taleefanno badan oo leh shatigaas marka la dalbanayo waxyaabaha aasaasiga ah, waxyaabahaas waxaa ka mid ah cinwaanka iimaylka diiwaangelinta.
Cusboonaysiinta ayaa imaan doonta sida ay qabaan DeepBlue Labs, qofka mas'uulka ka ah mashruuca, oo xilligan dhowr siidayn ka siidaynayey. JoyCon Droid waxaa loogu talagalay in si dhaqso leh loo isticmaalo oo dhammaantood leh dhowr tallaabo, ka dib markii sidaas la sameeyo waxay si dhakhso leh isugu lamaannaan doontaa iyadoo la furayo app -ka iyo gelitaanka goobaha Nintendo Switch.
U isticmaal NFC faa'iidadaada
JoyCon Droid wuxuu adeegsadaa farsamada NFC si uu u akhriyo Nintendo Amiibos, ku habboon haddii aad rabto inaad ku qabato koontaroolahan Android -ka ah. Isticmaalku wuxuu la mid yahay sida suufka jirka, sidaa darteed helidda Amiibo waxay noqon doontaa mid fudud sidii hore ilaa hadda.
Mustaqbalka, adeegsiga NFC wuxuu sii wadi doonaa fidinta, maadaama ay ku habboon tahay haddii aad rabto inaad bixiso lacag -bixinno, oo ay ku jiraan bixinta tareenka dhulka hoostiisa ah, baska iyo sidoo kale inaad wax ka iibsato dukaamada. Iyada oo JoyCon Droid la adeegsan karo marka la iibsanayo hal ama ka badan Amiibos kaliya adoo ku xiraya remote -ka konsole.
Shuruudaha lagu ciyaaro JoyCon Droid
Mid ka mid ah shuruudaha ugu horreeya ee JoyCon Droid inuu shaqeeyo waa inuu lahaado Android 9.0 ama nooc ka sareeya, haddii ay leedahay nooc ka hooseeya, ma cadda in ay shaqayn doonto. Nooca nidaamka hawlgalka Android waa muhiim maxaa yeelay wuxuu la jaan qaadayaa cusboonaysiinta JoyCon Droid ee ugu dambeeyay.
Shuruudda kale ee dalabka si uu u shaqeeyo 100% waa inuu lahaado astaanta Bluetooth HID, haddii kale waa inaan abuurnaa astaan. Tallaabooyinka la qaadayo waa in la isku xiro astaanta xiriiriyaha Bluetooth, haddii aad hore u abuurtay, kaliya gal oo raac tallaabooyinka JoyCon Droid u shaqeeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo isticmaalo taleefankaaga gacanta sida Nintendo Switch control
Cubot MAX3 cusub: 6,95 inji iyo kamarad 48 MP ah $ 99,99
11 -ka rome ee ugu fiican Android roms -ka si loogu ciyaaro Classics -ka